Cinnamon 5.0 waxay la socotaa hagaajinta maaraynta xusuusta, hagaajinta qaybaha iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
Qorfe 5.0 wuxuu la yimaadaa hagaajinta maaraynta xusuusta, hagaajinta qaybaha iyo waxyaabo kale oo badan
Kadib lix bilood oo horumar ah sii deynta nooca cusub ee deegaanka desktop-ka caanka ah "Qorfe 5.0", halkaas oo bulshada Linux Mint ay horumarinayso fargeeto ah GNOME Shell, maareeyaha faylka Nautilus, iyo maareeyaha daaqada Mutter, iyadoo ujeedadu tahay bixinta deegaan GNOME 2-qaab caadi ah oo lagu taageerayo isdhexgalka GNOME Shell.
Qaabkan cusub xoogaa isbeddello quruxsan ayaa la soo bandhigaa kuwaas oo hagaajinta u timid xalinta dhibaatooyinka la xiriira isticmaalka xusuusta, hagaajinta qaybaha qaarkood iyo kuwo kale oo badan la muujiyay. Nambarka nambarka ayaa loo beddelay 5.0 lama xiriiro wax isbeddello gaar ah oo muhiim ahKaliya waxay sii socotaa dhaqanka isticmaalka xitaa tobanle lambar si loo helo nuucyo deggan (4.6, 4.8, 5.0, iwm).
1 Waxyaabaha ugu muhiimsan ee cusub ee qorfaha 5.0
2 Sidee loo rakibaa qorfe 5.0 Linux?
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee cusub ee qorfaha 5.0
Qaabkan cusub dejimaha qaarkood ayaa la bixiyaa si loo go'aamiyo isticmaalka ugu badan ee xusuusta loo oggol yahay qaybaha desktop-ka iyo in la dejiyo bareeg si loo hubiyo xaaladda xusuusta. Marka xadidan la dhaafo, geeddi-socodka asalka Cinnamon dib ayaa loo bilaabay si toos ah adigoon lumin fadhiga iyo daaqadaha dalabka oo furan. Muuqaalka la soo jeediyay wuxuu noqday xalka lagu xalliyo dhibaatooyinka la xiriira xusuusta daadashada ee ay adag tahay in la ogaado, tusaale ahaan, waxaa lagu muujiyey kaliya wadayaasha GPU qaarkood.
Isbeddel kale oo ka dhex muuqda noocyadan cusub ee qorfe 5.0, ayaa ah hagaajinta maaraynta qaybaha dheeriga ah, Taas ka sokow kala-soociddii soo bandhigida macluumaadka ee tabs-ka ayaa la tirtiray iyada oo la rakibay lana heli karo si loo soo dejiyo tufaax, miisaska, mawduucyada iyo kordhinta.
Qaybaha kala duwan hadda waxay adeegsadaan isla magacyo, astaamo, iyo sharraxaad si loo fududeeyo shaqada caalamiga ah. Intaa waxaa sii dheer, soo bandhigida macluumaad dheeri ah sida liiska qorayaasha iyo aqoonsiga gaarka ah ee xirmada ayaa lagu daray. Shaqadu way socotaa si ay u bixiso awoodda lagu rakibo waxyaabo dhinac saddexaad ah oo lagu bixiyo keydka ZIP.
Waxaa sidoo kale la iftiimiyay in waxay ku dartay qalab cusub oo lagu hubiyo laguna rakibo cusbooneysiinta xawaaraha Qorfe, tan iyo markii adeegga khadka adeegga cusbo-cusbo-cusbooneysiin, taas oo soo bandhig liistada wararka cusub ee la heli karo oo ku dabaq iyaga, iyo sidoo kale module Python oo bixiya shaqooyin isku mid ah.
Qeybta la qeexay waxay suurta galisay in la dhexgeliyo howlaha cusbooneysiinta Cunnooyinka Cunnooyinka ee heerka "Cusboonaysiinta Maareeyaha" ee loo isticmaalo in lagu cusbooneysiiyo nidaamka (hore, si loo cusbooneysiiyo Beeyada Cunnada, waxaa lagama maarmaan noqotay in la waco qayb saddexaad oo wax qaabeeya ama tufaax) .
Maamulaha cusbooneysiinta ayaa sidoo kale taageeraya rakibaadda otomaatiga ah ee cusbooneysiinta Cinnamon Spices iyo xirmooyinka qaabka Flatpak (cusbooneysiinta ayaa la soo dejiyaa ka dib markii ay isticmaalayaashu galaan iyo ka dib rakibida Cinnamon reboots iyada oo aan kala go 'lahayn), oo lagu daray casriyeyn muhiim ah oo ku saabsan maareeyaha rakibaadda cusbooneysiinta ayaa socda, loo fuliyay si loogu qasbo dayactirka xirmada qaybinta ilaa taariikhda.
Lagu daray barnaamij cusub oo balaaran si loogu magac daro koox faylal ah oo ku jira qaab dufcadeed.
Maamulaha feylka, Nemo wuxuu kudarey awooda lagu raadiyo nuxurka feylka, oo ay kujirto isku darida raadinta maadada iyo raadinta magaca feyl. Markaad raadineyso, waxaad isticmaali kartaa muujinta caadiga ah iyo raadinta tusaha dib u noqoshada.
Naqshadeynta qaababka isku dhafan ee isku dhafan ee isku-dhafan Intel GPU iyo kaar NVIDIA ah, NVIDIA Prime applet wuxuu ku darayaa taageerada nidaamyada ku qalabaysan isku-dhafka AMD GPU iyo kaararka NVIDIA ee kala-duwan.
Qalabka loo yaqaan 'Warpinator utility' ayaa la hagaajiyay si loogu beddelo feylasha labada kumbiyuutar ee shabakad maxalli ah, iyadoo la adeegsanayo sirta marka la wareejinayo xogta Lagu daray awooda xulashada iskuxirka shabakada si loo go'aamiyo shabakada loo adeego feylasha.
Dejinta cadaadiska ayaa la hirgeliyay.
Codsi moobiil ah ayaa la soo saaray kaas oo u oggolaanaya is-weydaarsiga faylka aaladaha ku saleysan barnaamijka Android.
Ugu dambeyntii, waxaa sidoo kale lagu xusay in nooca cusub ee qorfaha waxaa lagu soo bandhigi doonaa Linux Mint 20.2, kaas oo loo qorsheeyay badhtamaha bisha Juun.
Sidee loo rakibaa qorfe 5.0 Linux?
Kuwa xiiseynaya inay awoodaan inay soo rogaan nuqulkan cusub ee jawiga desktop-ka, Waad sameyn kartaa hadda adoo soo dejinaya lambarka isha ee tan iyo ururinta nidaamkaaga.
Marka laga hadlayo Arch Linux xirmada weli lama helin kaydinta gudaheeda, laakiin AUR waa arrin saacado ah in la helo, waad la socon kartaa gobolka xiriiriyahan.
Si aad u rakibto xirmada isla marka la helo, ku qor kaliya:
Marka laga hadlayo Ubuntu iyo deriviyada, waqtigan xaadirka ah ma jiraan meel lagu keydiyo dhinac saddexaad oo leh cusbooneysiinta waxayna u badan tahay in nooca cusub uu marka hore gaaro kanaalada rasmiga ah, marka waa inaad qortaa:
Halka loogu talagalay Fedora, kaliya xirmada ayaa la heli karaa xilligan si la mid ah waqti dheer kuma qaadaneyso in la helo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Qorfe 5.0 wuxuu la yimaadaa hagaajinta maaraynta xusuusta, hagaajinta qaybaha iyo waxyaabo kale oo badan